Ra'isul wasaare ku xigeenka oo Sabab Layaab leh Shaqada looga eryay (Akhriso Warbixinta) | Allbanaadir News	Ra'isul wasaare ku xigeenka oo Sabab Layaab leh Shaqada looga eryay (Akhriso Warbixinta)
Ra’isul wasaare ku xigeenka oo Sabab Layaab leh Shaqada looga eryay (Akhriso Warbixinta)
Damian Green oo ka mid ah xulafada ay isugu dhaw yihiin ra’iisulwasaaraha Britain Theresa May ayaa shaqadii ra’iisulwasaare kuxigeennimada laga eryay ka dib markii lagu helay in uu ka tallaabay anshixii golaha wasiirrada.
Waxaa la waydiistay in uu is casilo ka dib markii lagu helay in uu “been iyo haddallo marin habaabin ah ka sheegay” waxa uu ka ogyahay eedaymaha sheegaya in kombiyuutarka xafiiskiisa laga helay muuqaallo galmo ah sannadkii 2008dii.
Laura Kuenssberg ayaa sheegtay in “ay koobnayd istikhiyaarta” ay haysatay ra’iisulwasaaruhu.
Tifaaftiraha arrimaha siyaasadda ee BBC ayaa sheegaya in rafiiqan ka baxay garabka May uu ra’iisulwasaaraha ka dhigay mid “mid cidlo ciirsila taagan”.
Green oo 61 jir ah oo ahaa ku xigeenka ra’iisulwasaaraha ayaa noqonaya qofkii saddexaad ee gollaha wasiirrada ka tirsan ee is casila muddo labo billood gudahood ah, Michael Fallon iyo Priti Patel ayaana is casilay bishii Nofembar.
May oo war qoraal ah ka soo saartay arrintan ayaa sheegtay “in ay aad uga xumaatay” xafiiska uu banneeyay Green balse waxay intaas ku sii dartay in ficilkiisu uu “ka hoos maray” hab dhaqankii laga filayay golaha wasiirrada.